जंगली जनावर मार्न दिनुस वा व्यवस्थापन गर्न कृषकहरुको माग
प्रकाशित मिति: भदौ 1, 2076
सिरहा,भदौ १ गते । सिराहा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका कृषकहरूले जंगली जनावर नीलगाईका कारण बालीनालीको क्षती भएको गुनासो गरेका छन ।
“मैले यस बर्षमा करिब पाँच काठा जमिनमा मकैको खेती गरेको थिएँ तर जंगली जनावर र बदेल,नीलगाईले यसको अधिकांश हिस्सा ध्वस्त पारेको छ । मेरो सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था भनेको उनीहरूले बालीनाली गरेर सबै बाली खानेछन, ”धनगढीमाई नगरपालिका १३ डाबरका महेश्वर श्रेष्ठले भने ।
गोलबजार नगरपालिका २ का प्रेम कुमार लामाले १२ कट्ठा जग्गामा मकैको खेती गरेका छन्। उनले यो पनि गुनासो गरे कि जंगली बदेलले उसको बालीनाली क्षति र्पुयाइरहेको छ । “गत वर्ष मैले ठूलो नोक्सान सहनुर्पयो। मसँग राम्रो फसल थिएन किनकि नजिकैको जंगलबाट जंगली जनावरहरूले मेरो बाली खाए। म यस वर्ष पनि यस्तै डर लाग्छ, ूउनले भने ।
अर्का किसान, रवीन्द्र थापाले गुनासो गरे कि उनले लगभग आफ्नो दैनिक आयको साधन हराइसकेको छ किनभने नीलगाई र भालुहरूले उनको तरकारीको खेत नष्ट गरिरहेका छन ।
“म पोइन्ट लौकी बेचेर आफ्नो जीविका चलाउँछु। तर, मैले तरकारी खेती गर्न कठिन समयको सामना गरिरहेको छु किनभने वन्यजन्तु र नीलगाईले फसल खानु पर्दछ र खाई बिरुवाहरूलाई क्षति र्पुयाउँछ, ”उनले भने ।
लामाका अनुसार जंगली जनावरबाट प्रभावित किसानहरूले गोलबजार नगरपालिकालाई समस्याको समाधान खोज्न अनुरोध गरेका थिए । नगरपालिकाले कि त हाम्रो जीवनलाई गाह्रो बनाएको जनावर मार्न दिनु पर्छ वा नियन्त्रण गर्न केहि गर्न दिनुपर्दछ, उनले भने । यद्यपि नगरपालिकाले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न केही गरेको छैन, किसानहरूले भने।
हाल यो समस्या सिरहा जिल्लाको उत्तरी नगरपालिका वा गाँउपालिकामा छैन यो समस्या वलान कोरीडोर, गाँगन खोला र कमला किनारका कृषकहरुको पनि यस्तै समस्या रहेको डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका सहायक वन अधिकृत राज कुमार ठाकुरले बताए ।
एक दिने नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्नः लक्षणहरु ?
फाल्गुन 9, 2076
गणेश कुमार ठाकुरसिरहा,फागुन ९ गते । सिरहा जिल्लाको मिर्चैया नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा एक दिने
शुक्रवार देशभर सार्वजनिक विदा
सिरहा,फाल्गुन ८ गते । संघीय सरकारले महाशिवरात्रीको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरक�
विद्युत् महसुल समायोजन प्रस्ताव सार्वजनिक वर्षको अन्त्यसम्म नयाँ दर
सिरहा,फाल्गुन ८ गते । चैत मसान्तभित्र नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने गरी विद्युुत् नियमन आयोगले प�
सिरहामा अनुगमन दुधालु गाई ? चियापान गर्न प्रहरी प्रशासन घरमै पुग्छ
मन्टेश्वरी तालिम प्रभावकारी हुँदै , सिरहामा फेरी सुरु
तमिलनाडुमा बस दुर्घटना हुँदा घुम्न गएका ६ नेपालीको मृत्यु
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काम अघि नबढाउन लेखा समितिको निर्देशन
अश्लिल शब्द प्रयोगले कर्मचारी यूनियनको आपत्ति
सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै कांग्रेसद्वारा राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध
प्रदेश २ सरकारको मधेश भवनमा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध